Computer | Page 2 of 3 | OROMIASAMSUNG
abdulwasi	 Oct 2, 2020 1
abdulwasi	 Sep 29, 2020 0
WinRAR'n sooftiweera daataa guddaa walitti cuunfanii (compress) kaa'uuf gargaarudha. Kunis tajaajila gurguddaa nuuf kenna. Fknf, email dhaan data guddatee nuuf ergamuu dide hamma isaa xiqqeessuun erguu nu dandeessisa. Dabalees bakka…
abdulwasi	 Sep 11, 2020 0
Kompiitarri ni dadhaba, akkuma namaa hojiin yoo itti baay'ates saffisni hojii isaa ni hir'ata. Kanaafuu, hamma barbaachisaa ta’e erga itti faayyadamnee booda boqachiisuun barbaachisaadha. Kompiitara keenya karaalee adda addaan boqonnaa…
abdulwasi	 Sep 5, 2020 0
Memory card hojii ala ta’e jechuun kan mobaayila keessatti hin dubbisne, yoo dubbises sirnaan kan hin hojjenne akksumas faayila erguu, fudhachuu fi haquu kan dide dha. Memory card akkanaa yoo jiraate CMD kompiitaraa fayyadamuun sirreessuu…
Kompiitara Desktop tokko osoo hin bitin dura qabxiilee ijoo 10 beekamuu qaban
abdulwasi	 Aug 31, 2020 2
Desktop Computer bituuf yeroo filannu waan baay’ee irratti hundaa'un ta'uu qaba. isaan keessaa hedduun keenya gosaa fi gatii kompiitarichaa qofa ilaallee binna ta'a. kuni immoo dogongoraadha. kompiitara tokko gatii xiqqaan argannee binne…
Kompiitara vaayirasiin miidhame akkamiin qulqulleessuu dandeenya?
Vaayirasii kompiitara keenya keessaa karaa lamaan qulqulleessuu dandeenya. isaanis, Scanner fayyadamuudhaan fi CMD fayyadamuudhaani. 1. Scanner fayyadamuudhaan vaayirasii kompiitara keessanii qulqulleessuuf stepi kana sirnaan hordofaa: …